Makonye 3, mashandisirwo evhiki | IPhone nhau
Ndinoyeuka ndichienda kumba kweshamwari kare kare uye ndichizviudza kuti taizotamba mutambo wehondo -kutendeuka. Ndakafungidzira kuti chingave chinhu kunze kwehonye ina pachikwata chinoshandisa pfuti, magirinedhi, kurohwa nemhepo, uye kunyangwe bhomba rembudzi. Iyo mitambo iri muWorms Saga ndeimwe yezvinhu izvo zvatinoda kuti hazvina musoro sei, asi imomo mune nhema yavo. Y mukati mevhiki rino tine maWorms 3 emahara sekushandisa kwesvondo.
Kune avo vasingazive, sekutaura kwandamboita, Worms 3 mutambo wekutendeuka-based, asi usatarisira kuenzanisa kwe 3D kana chero chinhu chakadai. Zvatichaona muWorms 3 idanho, kwete rakakura kunyangwe riri rehonye, ​​uye makonye masere, mana pachikwata. Imwe neimwe inoshandura honye kubva kuchikwata chega chega chekurwisa uyezve tinogona kushandisa zvombo zvakawanda, zvakadai sepfuti, pfuti yemuchina kana kunyange karate yepamusoro-yakatemwa.
Asi hazvisi zvese zvaizove zvakaita senge kare kare. Iwo maficha, ehe, ari nani zvikuru kupfuura pakutanga, kunyangwe chiri chokwadi zvakare kuti mune yekare PC vhezheni iwe unogona kugadzirisa manzwi kutaura zvataida. Zvine musoro, vhezheni yega yega ine zvuma zvayo uye muWorms 3 tichavawo ne-on-line mode, pamwe nemutambo unokurumidza uye mushandirapamwe mode kana mutambo we "pass and play" (pfuudza nhare kune mumwe wako pakona imwe neimwe) inova yakanyanya kufanana neshanduro yandakatamba kare kare. Semufananidzo (kana vhidhiyo) zvirinani pane chiuru chemazwi, pano ndinokusiya uine vhidhiyo iyo ichakubatsira iwe kuti uwane pfungwa yekuti Worms 3 yakaita sei.
Worms 3 mutambo wepasirese unoda iOS 5.1.1 kana gare gare, inowirirana ne iPhone, iPad uye iPod touch uye iyi app inogadzirirwa iyo iPhone 5.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Makonye 3, chikamu chechitatu chehondo pakati pemakonye ndiko kushandiswa kwesvondo
Nei Apple isingatenderi muzinga paIOS?